အကောကျခှနျဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခှဲ၏ ကွညောခကျြ - Logistics Guide
MACcs System ကို သုံးစှဲကွသညျ့ Private User မြားအနဖွေငျ့ (၅.၁.၂၀၂၀) ရကျနေ့ နောကျပိုငျး၌ နောကျဆကျတှဲ တှငျဖျောပွထားသော Error မြား ဖွဈပျေါခဲ့ပါက သှငျးကုနျထုတျကုနျလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျနသေူမြားသညျ မိမိတို့၏ ပသက (အဟောငျး)အမှတျမြားကို TIN Number Fomat ဖွငျ့ ထုတျပေးသော ပသက (အသဈ) အမှတျမြားသို့ ပွောငျးလဲခွငျးအား ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနသို့ သှားရောကျ၍ အမွနျဆောငျရှကျရမညျ ဖွဈပါသညျ။ ထို့သို့ TIN No. သို့ ပွောငျးလဲဆောငျရှကျပွီး ကွောငျး ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနမှ အကောကျခှနျဦးစီးဌာနသို့ အကွောငျးကွားလာသညျ့နေ့ နောကျတဈရကျတှငျကွညောလှာမြားကိုဆကျလကျဆောငျရှကျနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။
ထို့အပွငျ အကောကျခှနျဦးစီးဌာနမှ Data Migration ကို (၄) ကွိမျ ဆောငျရှကျပေးမညျ ဖွဈသညျ့အတှကျ (၃၀.၁၂.၂၀၁၉) ရကျနတှေ့ငျ အကောကျခှနျဦးစီးဌာန၏ Website နှငျ့ MACCS Facebook စာမကျြနှာတို့တှငျ ဖျောပွထားခဲ့သော ကွညောခကျြမြားအတိုငျး လိုကျနာဆောငျရှကျပေးကွပါရနျ အသိပေးကွညောအပျပါသညျ။
အဆိုပါကွညောခကျြမြားတှငျပါရှိသညျ့ ပသက အမှတျမှ TIN No. ပွောငျးလဲမှု လုပျငနျးစဉျမြားအပျေါတှငျ မရှငျးလငျးသဖွငျ့ စုံစမျးမေးမွနျးမှုမြား ပွုလုပျလိုပါက ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ (၇၊ ၈၊ ၉၊ ) ရကျနမြေ့ား၌ နစေ့ဉျ နံနကျ ၀၉:၃၀ ခြိနျမှ ၁၁:၀၀ ခြိနျထိ ရနျကုနျမွို့၊ အကောကျခှနျဦးစီးဌာန၊ (ရုံးခြုပျ၊အပျေါဆုံးထပျ) ဇယြောသီဟခနျးမတှငျ လာရောကျတှဆေုံ့ မေးမွနျး နိုငျပါကွောငျး အသိပေးကွညောအပျပါသညျ။
ကနျြရှိသောနရေ့ကျအခြိနျမြားတှငျလညျး ပုံမှနျအတိုငျး MACCS ဌာနခှဲ၏ Help Desk Section တှငျ မေးမွနျးစုံစမျး နိုငျပါသညျ။
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်
MACcs System ကို သုံးစွဲကြသည့် Private User များအနေဖြင့် (၅.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း၌ နောက်ဆက်တွဲ တွင်ဖော်ပြထားသော Error များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသူများသည် မိမိတို့၏ ပသက (အဟောင်း)အမှတ်များကို TIN Number Fomat ဖြင့် ထုတ်ပေးသော ပသက (အသစ်) အမှတ်များသို့ ပြောင်းလဲခြင်းအား ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ သွားရောက်၍ အမြန်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့သို့ TIN No. သို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ပြီး ကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားလာသည့်နေ့ နောက်တစ်ရက်တွင်ကြေညာလွှာများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ Data Migration ကို (၄) ကြိမ် ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည့်အတွက် (၃၀.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Website နှင့် MACCS Facebook စာမျက်နှာတို့တွင် ဖော်ပြထားခဲ့သော ကြေညာချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အဆိုပါကြေညာချက်များတွင်ပါရှိသည့် ပသက အမှတ်မှ TIN No. ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်တွင် မရှင်းလင်းသဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လိုပါက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇၊ ၈၊ ၉၊ ) ရက်နေ့များ၌ နေ့စဉ် နံနက် ၀၉:၃၀ ချိန်မှ ၁၁:၀၀ ချိန်ထိ ရန်ကုန်မြို့၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ (ရုံးချုပ်၊အပေါ်ဆုံးထပ်) ဇေယျာသီဟခန်းမတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်း နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ကျန်ရှိသောနေ့ရက်အချိန်များတွင်လည်း ပုံမှန်အတိုင်း MACCS ဌာနခွဲ၏ Help Desk Section တွင် မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
အကောကျခှနျဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခှဲ၏ ကွညောခကျြအမှတျ ( ၁၁၂ /၂၀၂၀)
MACCS စနဈ Declaration မှာ attach လုပျစရာ မလိုတဲ့ စာရှကျစာတမျး စာရငျး (မူကွမျး)
အကောကျခှနျဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခှဲ၏ ကွညောခကျြ ပို့ကုနျကွညောလှာတငျသှငျးသူမြားသိရှိနိုငျပါရနျ